Hevitra MPANOHARIANA | Politika | 52
2007-04-24 @ 07:46 in Politika
Hiresaka politika any Frantsa aho eto. Milaza miara-mahita aho fa notontosaina tamin’ny alahady teo ny fifidianana ho filoham-pirenena fihodinana voalohany. Tsy te-hiditra lalina aho fa tery nanoratra ihany Amin’ny zavatra afahana ny mpihaino indrindra fa ny aty amin’ny faritra Afrika. Be rahateo ny Malagasy mipetraka any Frantsa sy Malagasy mizaka zom-pirenena frantsay indrindra indrindra. Ny rfi mazava loatra no tena be mpihaino aty ivelan’i Frantsa.
Etsy ankilan’izay ihany koa dia ninia aho niandry, nihaino izay hevitry ny olom-pantatra sy hevitry ny Malagasy ankapobeny fantatra hevitra. Dia hamoaka izay hevitra mety tsy hifanarahana amin’ny rehetra izao. Famoahan-kevitra rahateo ny eto na dia hiteraka adi-hevitra aza izany tsy mampaninona ahy fa izay no lalànan’ny fahalalahana.
Voalohany, misy dia toy ny ompa na fanaovana tsinontsinona olona betsaka tsikaritro. Ny iray aloha dia efa nahitsy ihany tahaka ny fampifidianana mialohany mponina any DFA (departemanta frantsay any amerika) izay efa nitaraina hatrany taloha hoe mbola eo andalam-pifidianana ry zareo ary tsy mbola mikatona akory ny biraom-pifidianana dia efa mahare ny valim-pifidianana sahady ny maro. Be noho izany kivy mialoha sy mieritreritra fa hay tsy hisy dikany intsony izay safidy hataony eo. Na vitsy aza ry zareo dia tsara napetraka hatramin’izay ny fanajana ny mpifidy.
Efa voavaha moa ny amin’iny ka tsy asiana resaka lava intsony. Mahavariana hatramin’izao ihany koa, ahy manokana aloha, ary heveriko ho tafiditra indrindra anaty rafitra ilay izy dia famoahana ara-keviny (estimations) no tena avoaka amin’ny fampahalalam-baovao manomboka amin’ny valo ora hariva nefa dia eken’ny mpijery sy ny mpihaino rehetra ho marina avy hatrany izay ankevitra izay. Izany hoe to teny eo amin’ny rehetra ilay voka-pifidianana avoaka amin’iny ora iny. Ireharehan’ny sasany eto Madagasikara moa izany famoaham-bokatra any Frantsa izany hoe tena malaky fa tsy toy ny eto izay ela be vao voangona ny vokatra manontolo. Eo dia heveriko fa efa tsara petraka ny rafitra rehetra amin’ny fanatontosana sy ny fanaraha-maso hany ka na dia antso an-tarobia sy fax aza no ampitana ny vokatra dia heverina ho marina avy hatrany iny. Nitovitovy rafitra taminy frantsay moa ny malagasy ka izay fipetraky ny rafitra izay indrindra angamba no nahatonga ilay fitakiana fampitaham-bato tamin’ny taona 2001 – 2002 iny nefa tsy neken’ny mpitondra tamin’izany fotoana izany satria manozongozona ny fahamarinany ilay fitakiana. Hoy aho hoe enga anie ka samy hanana ny fanisam-batony ny antoko tsirairay ka miasa tsara hanamarina fa tsy hiandry izay avoakan’ny hafa fotsiny. Tsy matoky saka manko aho fa trondro ny laoka.
Manaraka izany indray dia tsy mendrika mihitsy ny fomba fiteny sasany tahaka ny hoe araka ny mahatanora sy manampahaizana ny mpifidy no nifidianana sosialista tamin’ny alahady ary arakaraka ny mahaantitra sy mahavendrambendrana azy no nifidianany Sarkozy. Fanadihadiana omaly tamin’ny 3 ora mahery teto Madagasikara na tamin’ny 2 ora mahery tany Frantsa no namoahana izany tao amin’ny rfi. Ny antitra izay conservateur no mifidy an’ilay laharana voalohany hoy izy ary ny tanora 18 – 24 no tena maro an’isa nifidy Sarkozy.
Etsy ankilan’izay dia toa iniana aely hatrany ny tsy fitiavana Sarkozy ho toy ny ho loza ho an’ny firenena frantsay ny hahatongavan’io rangahy io eo amin’ny fitondrana. Misy moa fitenenana mampahonena mihitsy toy ilay mpiantso iray avy tao Afrika tao niteny hoe : « ianao izay mpifindra monina ve no misakana ny hafa rehetra te-hifindra monina any Frantsa fa maninona raha avelao hiditra ny hafa ? ianao mpifindra monina ve no te-hitondra an’i Frantsa ! tsy mendrika hitondra an’i Frantsa ianao satria mpifindra monina ». Izany hoe ireo Afrikana tsy tia indrindra ny hevitry Le Pen no mitondra indray ny heviny amin’ny radio mieli-patrana eran-tany ny feony. Tsy haiko aho na tokony halahelo na tokony hihomehy.
Manaraka izany dia zara fa tsy ompa sisa koa no atao amin’ireo rehetra nifidy Sarkozy (adino indray teto ny nifidy Le Pen satria vitsy an’isa angaha !). Ny afa-miteny amin’ny rehetra (artista sy mpanao gazety) moa dia zara raha tsy teny mivantana hoe tena efa mpanavakavaka ihany koa ny 30% (adino ilay 10% fanampiny avy amin’ny nifidy Le Pen !). Moa tena izany tokoa ve no hevitr’ireo mpifidy ? dia kendrena ho haratsiana sy ho afa-baraka tahaka ny tamin’ny taona 2002 indray izay nifidy Sarkozy tamin’ity taona ity. Kendrena mba tsy hihoatra intsony ny 30% isan-jato no vato azony ( ataovy hoe 40%) satria hoe fanohintohinana ny demokrasia sy loza mananontanona ho an’ny Repoblika ny fifidianana azy. Karazana fampiasaraham-bazana eo amin’ny samy mpifidy frantsay no kendrena rehefa tsy hahavoa amin’ny fifidianan-ko avy. Tahaka ny fanomanana korontana sahady sa fanomanana ny sain’ny olona amin’ny mety ho fanodikodinam-bato ho avy ? Izaho manokana manko dia tsy mino hatramin’izao fa tena tsy nihetsika intsony ny vato azon’i Le Pen tamin’iny fifidianana tamin’ny taona 2002 iny. Halabato « ara-panjakana » no nisy tamin’ny famoahana ny vokatra ary izay rahateo no tsikerako amin’ny rafi-pifidianana frantsay nolazaiko tery ambony.
Efa paika sosialista moa izao ny hoe karazana fitsapa-kevi-bahoaka hanekena na tsia an’i Sarkozy no atao amin’ny fihodinana faharoa. Tsiaron’ny fitsapa-kevi-bahoaka momba ilay lalam-panorenan’i Eoropa nandresen’ny Tsia fotsiny izany amiko. Eny, sarotra manko ny hampandresy amin’ny alalan’i Segolene Royal dia afantoka amin’ny resaka Sarkozy ny adi-hevitra. Samy manana ny paikany tokoa. Amin’itony fifidianana itony na dia any ivelany aza no itarafana hoe manao ahoana moa izany ny paika politika fanorona eto Madagasikara amin’izao fotoana izao.
«Mialoha 1 2 3 ... 47 48 49 50 51 52 53 Manaraka»